အမှတ်တရလေးများ: ၁.၈.၂၀၁၂(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း။
သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၆ ခုကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခု ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန်း(၁၄)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၁.၈.၂၀၁၂ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်သန်းညွန့်တို့အား ရည်စူး၍သမီး- Dr.ခင်အေးမူ၊ ဒေါ်မိမိတင်သား-ဦးအောင်လတ်+ဒေါ်နီလာမြင့်သား-ဦးမိုးအောင်ကျော်မြေး-စုထက်အောင်၊ဖြူထက်အောင် မိသားစု၏ အလှူ။နံနက်အရုဏ်တက်ချိန်တွင်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား ကြက်သားကြာဇံချက်ဆွမ်းကပ်လှူပေးခဲ့ပြီးသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနေ့ဆွမ်းဘုန်းပေးသုံးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဆွမ်းငါးကြော်သရက်ချဉ်သုတ်ကုလားပဲနှပ်ပါလချောင်ကြော်စသည့်ဟင်းလျာများဖြင့်လှူဒါန်း ကုသိုလ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ယနေ့အလှူရှင် ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သော ဦးတင်ထွဋ်+ဒေါ်သန်းညွန့်တို့အား ရည်စူး၍သမီး- Dr.ခင်အေးမူ၊ဒေါ်မိမိတင်သား-ဦးအောင်လတ်+ဒေါ်နီလာမြင့်သား-ဦးမိုးအောင်ကျော် မြေး-စုထက်အောင်၊ဖြူထက်အောင် မိသားစု အားလုံး ဘုရားအမှုးရှိသော သံဃာတော်အရှင်သူမြတ် တို့အား မွန်မြတ်လှစွာသောအရုဏ်ဆွမ်း၊ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းများလောင်းလှူရသော ကောင်းမှု ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့် ဆွမ်းအကျိုးငါးပါးပြည့်စုံကြ၍စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် သာသနာတော်ကြီး အကျိုးနှင့်လောကကောင်းကျိုးသယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ '
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ပေါ့တလန်မြို့၊ သိရီမင်္ဂလာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် နှင်...
သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တမန်မိုဟာမက် ဟာ ခရစ်တော် ပေါ်ပြီး ၅၇၁ ခု၊ ဧပြီလ ၂၀ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ မက္ကာမြို့ဘာရှင်မျိုးနွယ်စု၌ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။
Congrats! to Myanmar women’s National Football Team
photo credit to : MFF အာရှ ခြေစစ်ပွဲ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေသည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းသည် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ရေးအတွက် အဆုံးအဖြတ် ပွဲစဉ်ြ...
ဇွန်လဆွမ်းအလှူရှင်စာရင်း- ၁.(၁.၆.၂၀၁၃)စနေနေ့ ဦးကျော်ကျော်ထွန်း + ဒေါ်သဇင်လွင်၊ သား- ပြည့်စုံထွန်း, ဟိန်းပြည့်ထွန်း မိသားစု (Australia) ကောင်းမှု ။ (အရု...
မေလ ၂၆ ရက်နေ့အတွက် နေ့ဆွမ်းအလှူ
ကိုဘုန်းမြင့်ဇော်+ မသင်းသင်းသူ (စင်္ကာပူ)မှ ကိုဘုန်းမြင့်ဇော်၏ (၃၀)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လှူဒါန်းသော မေလ ၂၆ ရက်နေ့အတွက် နေ့ဆွမ်း အလှူတော်ငွေ စင်္ကာ...
တစ်ခါတုန်းက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ သစ်ခုတ်သမားတစ်ဦးရှိပါတယ် ။ သူဟာေ န့တိုင်းတောထဲကိုသွားပြီး ထင်းတွေခုတ်လို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုတယ် ။ တစ်နေ့တေ...
မနက်သုံးနာရီကစပြီအခုထက်ထိဘာမှ မစားသေးဘူးဆိုတော့ Fasting လုပ်တာ ဆယ်နာရီဖြစ်သွားဘီ. စိတ်ကူးပေါက်လို့စစ်ကြည့်တာ glucose ၅.၆ ဆိုတော့သိတ်အားမရသေးသလိုဘဲ. ပလာတ...
Number of View: 466 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။
ကျုပ်တွေးရင်း သဘောကျနေမိတယ်။ ဒီကောင်ကဗျာ ကျုပ်နဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာကတည်းက လည်ပင်းဖက်ပေါင်...
မိတောရဲ့ ရှတတနေ့စွဲများအကြောင်းကို ရေးဖို့ကို ရင်ထဲမှာ အပျော်တွေ ထုံမွှန်းနေလို့ ဘယ်ကစရမယ် မသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ အစဦးဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သက်တံ၁၀စင်း နောက်မှာ...